HALKAAN KA AKHRISO WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH AXAD 1-DA MAARSO 2020-KA
Sunday March 01, 2020 - 09:25:00 in Wararka by Mogadishu Times
Wasiirka Maaliyada Bayle oo la kulmay Agaasimaha Hay'ada IMF Kristalina Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugan Magaalada Washington ee dalka Marayka-nka ayaa la kulmay Agaasimaha Fulinta H-ey'adda lacagta a
Wasiirka Maaliyada Bayle oo la kulmay Agaasimaha Hay'ada IMF Kristalina Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugan Magaalada Washington ee dalka Marayka-nka ayaa la kulmay Agaasimaha Fulinta H-ey'adda lacagta aduunka Kristalina_Georgieva. Wasiirka oo u wara-mayay Warbaahinta ayaa sheegay in kulankaasi uu la yeeshay Agaasimaha guud ee Hay'adda Lacagta Aduunka Krista-lina_Georgieva uu ahaa mid muhiim ah. "Waxaan uga mahadceliyay hoga-aminteeda wanaagsan iyo dadaalkii ay Hey-'adda Lacagta Aduunku ka soo qaadatay dib u habeynta Maaliyaddeena iyo hannaanka deyn cafinta Soomaaliya"ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda. Wasiirka ayaa sheegay in Dham-maan Caalamka iyo IMF aan u xaqiijinayo in Dowladda Soomaaliyeed ay ka go'antahay tilaabo kasta oo lagu horumarinayo dhaq-aalaha Soomaaliya iyo isbedelka Maali-yadda. Dhowaan ayaa Bangiga Adduunka waxa uu ku dhowaaqay in uu dib u soo celiyay xiriirkii uu lahaa dowlada Soomaaliya kadib soddon sano oo aysan wax xiriir ah ka dhexeyn.
Illaa 12 xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Kenya kuw-aasoo laga soo doorto gobolada Waqoyi Bari Soomaaliya ayaa Shalay gaaray maga-alada Muqdisho iyagoo kulamo la yeelanayo madaxda dowlada federalka Soomaaliya.
Ujeedada booqashada xildhibaa-nadan oo aan si rasmi ah loo shaacin ayaa wararka qaar sheegayaan inay kala hadl-ayaan madaxda Soomaaliya arrimo ku saa-bsan amniga labada dal gaar ahaan gob-olada Waqooyi Bari Soomaaliya.
Xildhibaanadan ayaa waxaa ka mid ah qaar dhowaan su’aalo ku weydiiyay gudaha Baarlamaanka Kenya wasiirka gaas-haandhiga Kenya,iyagoo wax ka weydiiyay joogitaanka wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ay sheegeen inuu joogo magaalada Mandhera.
kale ujeedada booqashada xildhiba-anadan ayaa waxaa ka mid ah sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen la daga-alanka ururka Al-Shabaab iyadoo dhowaan Madaxweyne Kenya Uhur Kenyatta ugu ba-aqay madaxda gobolka Waqoyi Bari Kenya inay la yimaadeen qorshe lagula dagaa-lamayo Al-Shabaab.
Xildhibaanadan ayaa sida ay shee-gayaan wararka ku dhow dhow madaxt-ooyada Soomaaliya waxa ay la kulmeen Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farma-ajo. Hase yeeshee marjiro wax war ah oo ka soo baxay kulanka ay xildhibaanada Kenya la yeesheen Madaxweyne Farmaajo.
Booqashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan ay dowlada federalka Soom-aaliya ku eedeysay dowlada Kenya inay fa-rogelin ku hayso arrimaha Soomaa-liya,-balse eedeyntaas waa iska fogeeyay dow-lada Kenya.
Qofkii Ugu Horreeyay Oo Coronavirus Ugu Dhintay Mareykanka
Magaalada Washington ee dalka Mare-ykanka ayaa xaalad deg deg ah loogu dhaw-aaqay kaddib marki qofki ugu horreeyey ee qaba cudurka Coronovirus uu cudurka u dhintay.
Qofkii ugu horreeyay ayaa cudur-kaasi Coronavirus ugu dhintay dalkaasi Mareykanka, gaar ahaan gobolka woqooyi galbeed ku yaal ee Washington, halkaasi oo haatan xaalad deg deg ah looga dhawa-aqay.
Mas’uuliyiinta caafimaadka dalkaasi ayaa sheegaya in nin da’diisu tahay kont-omeeyo oo xaalado caafiamad oo hore la il darnaa uu haatan cudurkaasi u dhintay.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dadka kale uu cudurkaasi soo rito balse, dal ahaan ay u diyaarsan yihiin xaalad kasta oo soo wajahdo.
Mas’uuliyiinta dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay in xayiraad lagu soo rogayo dadka doonaya in ay u safraan dhanka dalka Iiraan, waxaana shacabka dalkaasi Mareykanka loogu baaqay in aysan booqan deegaannada uu cudurkaasi ka dillaacay ee waddamada Talyaaniga iyo Kuuriyada Koo-nfureed.
Culeyska laga dulqaaday Madaxweyne Qoorqoor iyo caqabadda weli haysata
Macalin Maxamuud Sheekh Xasan/aarax, Hoggaamiyaha Guud ee Ahlu Sunna Waljam-eeca ayaa Shalay ku dhawaaqay inay u tanaasuleen danta dadka reer Galmudug.
Hoggaamiyaha oo ka barbar hadl-ayay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo Saxaafadda kula hadlay Xarunta Mad-axtooyda Dhuusamareeb ayaa iclaamiyay inay ka tanaasuleen go’aankoodii siya-asadda ee Galmudug."Waxaan ka tanaa-sulnay go’aankeenii siyaasadeed ee Hogga-aminta Galmudug, inagu diyaar uma nihin in markale dhiig daato ama bulshadu iska hortimaado.” Ayuu yiri Hoggaamiyha Guud ee Ahlu Sunn Waljameeca.
Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa taasi bedelkeeda sheegay inay u sii taagnaan doonaan doorkoodii diimeed iyo mabaadii’da Ahlu Sunna Waljameeca.
"Waxaan u taanaganahay doorkeenii diimeed iyo caqiiqada Ahlu Sunna Walja-maaca, oo aan u sii taagnaan doono.” Ayuu yiri Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Fa-arax.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa isna goobta ka sheegay in amn-iga Culimada Ahlu Sunna, ay masuuliyad ka saaran tahay Taliyha Guutada 15aad ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Mascuud Maxamed Warsame.
"Masuuliyadda amniga dadka masu-uliyiinta ahoo joogga ee mashaa’iiqda iyo culima’udiinka inuu masuul ka yahay Gen-eral Mascuud, oo ilaalinayo, wixii ay u baa-hdaan, xagga amniga ha noqoto ama xagga fulinta ay fulinayan wixii ay dadka u fulin jireen, wecyigelin, dersi bixin, tawciyo iyo waxwalba. Hadda ka dib si aysan u bol-oloobin, maadaama ay Shabaab aad ula dagaalameen.” Ayuu yiri Sheekh Maxamed Shaakir.
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ee garabka do-wladda ayaa waxaa muuqata in culeyskii uga weynaa ee ka haysatay Madaxtini--madiisii Galmudug laga hor wareejiyay, bal-se aanay weli caqabaddu dhammaan.
Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), Mad-axweynaha weli talada Galmudug haya ayaa ku celceliyay inuu isagu yahay Madaxwe-ynaha Galmudug, xilkana uu uga harsan yahay muddo shan iyo toban bilood ah, wax-aana guuldareystay wadahadalo labada dhi-nac u socday.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa ergo uu u diray Madaxweyne Xaaf, waxay ka co-dsadeen inuu u tanaasulo, isla-markaana uu ka soo qaybgalo caleemo saarkiisa, hase ahaatee uu ka soo horjeestay.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Dhacdo.com u sheegay in Mada-xweyne Qoorqoor uu markale wadahadal la bilaabay Madaxweyne Xaaf, qasdigiisa ugu weyna uu yahay inuu u tanaasulo, kana soo qaybgalo xafladiisa caleemo saarka, oo la fillayo inay ka qabsoomto Magaalada Dhuu-samareeb.
Ujeedada ugu weyn ee Qoorqoor ayaa ah inuu xilka si rasmiya ugu wareejiyo Axmed Ducaale Geelle, Madaxweynaha weli talada Galmudug haya, oo tan iyo bilowgii bishii January ku sugan M/Gaalkacyo.
Dadka reer Galmudug ayaa kuu shee gaya in Madaxweyne Qoorqoor uu ka gud-bay boqolkiiba shan iyo toddobaatan (75%) caqabaddii ka hortaagneyd inuu si hufan kursiga ugu fariisto.XGASHO. Dhacdo.com
Mareykanka iyo Taliban oo kala saxiixd ay heshiis taariikhi ah oo ay ciidamada Mareykanka ku baxayaan
Saraakiil Mareykan ah iyo wakiilo ka so-cda ururka Taliban ayaa Shalay heshiis taariikhi ah ku kala saxiixday M/Doha ee dalka Qatar, si loo soo gunaanado joogita anka ciidamada Ma-reykanka ee dalkaas.
Heshiiska ayaa waxaa wada saxi-ixay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan Zalmay Khalilzad iyo madaxa siyaasadda Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, waxaana goobjoog ka ahaa xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo.
Wakiilka Taliban ee Doha, Moha-mmed Naeem ayaa heshiiska ku qaaxay "ta-llaabo horey loo qaaday”. "Heshiiskan waxa uu soo geba gebeynayaa dagaalka Afghan-istan,” ayuu u sheegay taleefishinka Al-Jazeera.
Bayaan ay si wada jir ah usoo saare-en dowladaha Mareykanka iyo Afghanistan ayaa lagu sheegay in ciidamada Marey-kanka iyo NATO ay dalka Afghanistan uga bixi doonaan muddo 14 bil gudahood ah, haddii Taliban ay u hoggaansanto qodobada heshiiska.
"Dowladda Mareykanka waxay ciid-ankeeda Afghanistan kusoo yareyn doontaa 8,600 oo askari, muddo 130 maalin guda-hood ah,” ayaa lagu yiri bayaanka Marey-kanka iyo Afghanistan.
Taliban ayaa sidoo kale ballan-qa-aday inay joojiso dhammaan weerarad ka dhan ah ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO, waxaana daqiiqado ka hor inta aan la saxiixin heshiiska, ay ku amreen daga-alyahanadooda inay si rasmi ah u joojiyaan dagaalka.
Heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya in dowladda Afghanistan ay Golaha Amma-anka ee QM kala shaqeyso sidii xubnaha Taliban looga saari lahaa liiska xayiraadda, ugu dambeyn 29-ka bisha May.
Qodobada heshiiska ayaa waxaa ka mid ah wada-hadallo nabadeed oo loo qabto dadka Afghanistan iyo in lasii daayo 5,000 oo dagaalyahan oo Taliban ah oo xabsiyada ku jira.Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanaddii 2018 bilalabay dada-allo Mareykanka uu kula hadlayo Taliban, isaga oo doonaya inuu soo afjaro dagaalka Afghanistan, oo ah kii ugu waq tiga dheeraa ee ciidamada Mareykanka ay ku lug yeeshaan
Madaafiic la isku weedaar-saday degaanka Tukaraq
Ciidamada maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa madaafiic aan tiro ahaan la garan karin waxa ay saacadihii la soo dhaafay isku weedaar-sadeen degaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Dadka degaanka ayaa waxa ay Ida-acadda Risaala u sheegeen inta ay mada-afiicdan socotay in sidoo kale ay maqleen rasaas goos goos ah oo labada dhinac ay kala ridayeen.
Waxaa la sheegay madaafiicdan ay is weedaar-sadeen Somaliland iyo Puntland in ay geysteen khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadan iyo dadka rayidka ah.
Colaada ka taagan degaanka Tuk-araq ayaa waxay u muuqataa inaan weli laga gaarin natiijo sax ah, baaqyo nabadeed oo la soo saaray kadib weli waxaa taagan xi-isad dagaal, oo u dhaxeysa labadan maa-mul.
Puntland”Waa xoog sheegasho waxa Shalay ka dhacay Galmudug”
Maamulka Puntland ayaa ku tilma-amay nasiib daro weyn dagaalkii Ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku qaadeen Xarumaha Ururka Ahlusunna ee degmo-oyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb.
Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo isugu jira Shacab iyo Askarta lab-adii dhinac ee dagaallamaayay.
Wasiirka Arrimaha gudaha maam-ulka Puntland Maxamed Cabdiraxman Dha-mancad ayaa sheegay in Puntland ay ka xun tahay waxa ka dhacay Magaalada Dhu-usamareeb.
Waxa uu sheegay in dowladda dhe-xe ee Soomaaliya ay kula jirto dagaal Nid-aamka faderaalka ah ee dalka qaatay, islamarkaana Puntland aysan u dulqaan do-onin.
"Waa nasiib-darro in dowladda fed-eraalka ahi xoog u adeegsato bur-burinta dowladihii qayb-ta ka ahaa nidaamka feder-aalka ee dalku qaatay, waa xoog sheegasho waxa ka dhacay Galmudug” ayuu yiri Wasiir Dhamancad.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa qiimeyn ay ku sameysay caabuqa coronavirus ku tilShalayy inuu khatar sare ku hayo dunida.
Waxa ay sheegtay in weli ay jirto fursad wax looga qaban karo caabuqa had-dii laga hor istaago faafitaanka.
Agaasimaha WHO Dr Tedros Adh-anom Ghebreyesus ayaa sidoo kale she-egay in cabsi iyo xog khaldan oo xanuunka ku saabsan ay yihiin cabaqadda ugu weyn ee ay tahay in wax laga qabto.
In ka badan 50 dal ayaa haatan soo weriyay kiisas caabuqa coronavirus ah.
Shir jaraa`id oo uu ku qabtay magaalada Geneva, ayaa Dr Tedros wuxuu ka sheegay in inta badan kiisaska wax laga qaban karo, isla markaana aa wax caddeyn ah loo heyn in caabuqu uu si fudud ugu dhex faafayo bulshada.Guud ahaan dunida, in ka badan 80,000 qof ayaa la xanuunsan cudurka Co-rona kaas oo Shiinaha ka bilowday bishii Disembar,Cudurkan oo ku dhac neef mare-enka ayaa waxaa haatan u dhintay dad gaarayo 2,700 qof.
Xildhibaan u geeriyooday cudurka Coronovirus
Xildhibaan ka tirsan Baaralmaanka da-lka Iran ayaa u geeriyooday cudurka Corona Virus sida ay xaqiijisay wakaaladda Wararka ee dalkaas taasoo muujineyso sida uu cudurkaan ugu faafay dalka Islaamiga ee Iiraan,Mohammad Ali Ramazani Dastak kaasoo asbuucii hore loo doortay Xildhibaan ayaa la rumeysan yahay inuu u geeriyooday cudurka Corona Virus oo maalmo ka hor laga helay.
Xildhibaankaan ayaa dhintay Shalayy aroortii hore markii loo qaaday Isbitaal kadib markii uu qabtay xanuun aad u daran oo uu sababay cudurka Corona Virus.
Xildhibaankaan ayaa noqonayaa siy-aasigii u horreeyay ee u geeriyooda cud-urkan, Waxaa sidoo kale Cudurka uu ku dh-acay Madaxweyne ku xigeenka Iran iyo Wasiir ku xigeenka Caafimaadka dalkaasi.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Caafima-adka ee dalka Iran ayaa sheegay in cudur-kaan ay u geeriyoodeen illaa 43 qof halka sidoo kale la helay 593 kiis oo ku saabsan cudurkaan.
Wadamo badan oo dunida ku yaalo ayaa iska joojiyey duulimaadyada ka imaa-nayo iyo kuwa aadayo dalka Iiraan oo ah wadanka labaad ee sida weyn uu u sam-eeyey cudurkaan marka laga reebo dalka Shiinaha oo ah halka uu markii hore cud-urkaan ka bilowday.
Nin la nool HIV/AIDs oo 20 sano xabsi ya ku mutaystay kufsi gabadh 9 jir ah
Maxkamada sare ee Punt-land ayaa Shalay 20 sano oo xabsiya ku riday nin la nool cudurka HIV/AIDs oo kufsi u geystay Farax Faa-rax Jaamac Siyaad oo ahayd 9 jir.
Mukhtaar Cabdikaafi Xirsi , oo 36 jir ah, ayaa sidoo kale wajahaya magdhow lac-ageed oo dhan $5,000, kadib markii uu sid-oo kale ku xadgudbay gabarnimadeeda.
Ninkaan ayaa sanadkii hore maxka-mad kutaala Gaalkacyo ku xukuntay dil too-gasho. Hase yeeshee maxkamada racfa-anka ayaa xukunkaas burisay, iyadoo ka dhigtay 20 sano iyo shan kun oo dollar.
Xukunka ayaa mar kale usoo gud-bay maxkamada sare, taasoo Shalay ayiday go’aankii maxkamada racfaanka ka qaad-atay kiiskaan.
Puntland , sanadkii hore waxay u ah-ayd sanad ay ka dhaceen kufsiyadii ugu foosha xumaa ee abid ka dhaca Soom-aaliya.
Saddex kamid ah kiisaska ayaa ah-aa kufsi iyo dil. Inkastoo mid kamid ah cad-aalada la marsiiyay hadana weli waxaa horyaala labo kiis oo Puntland u ahaa-ndoona tijaabo kale oo oculus.
Labadaas kiis waxay kala yihiin, ma-rxuumad Hodan Shanlaysane oo Garowe lagu kufsaday laguna dilay iyo Najma Ca-bdulqaadir oo ahayd 11 jir lagu kufsaday Burtinle markii dambena u geeriyooday dha-awacii kasoo gaaray.
Wafdi uu hoggaaminayay Guddoomiye Mursal oo Jabuuti lagu soo dhaweeyay
Wafdi uu hoggaaminayo Guddo-omiyaha Golaha Shacabka ee Baarlama-anka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaa-liya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa gaaray Caasimadda Dalka Aynu walaalaha nahay ee Jamh-uu-riyadda Jabuuti.
Wafdiga Guddoomiyaha Golaha Shacabka waxaa garoonka diyaaradaha Ee dalka Jabuuti kusoo dhoweeyay Gu-ddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Mud-ane Maxamed Cali Xumud iyo sidoo kale Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa casuumaad rasmi ah ka helay dhi-ggiisa dalka Jabuuti waxa uuna ka qeyb geli doonaa furitaanka kalfadhiga 8-aad ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Kenya oo duqeyn la beegsatey Xarun ay leedahay Shirkadda Hormuud
Wararka laga helayo Gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in diy-aarad ay leedahay Dowladda Kenya ay xalay duqeyn dhinaca cirka ah la bee-gsatay Xarun Shirkadda Isgaarsiinta Hor-muud ku leedahay duleedka degmada Ceelwaaq ee Gobolkaasi Gedo.
Xarunta la duqeeyey ayaa goob-joogayaal waxaa ay sheegeen inay ku taallo Deegaanka Xiisa Guur Oo 20-KM U Jira Degmada Ceelwaaq Ee Gobolka Gedo,waxaana jira khasaaro duqeyntaas kasoo gaarey Xarunta Shirkadda.
Xasan Aadan Biixi oo kamid ah Saraakiisha Ciidamada dowladda ee de-gmada Ceelwaaq ku sugan ayaa sheegay in Diyaarad laga leeyahay Kenya ay 11 Gantaal ku garaacdey Xarunta Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ee deegaanka Xiisa Guur iyo Xaafadaha ku dhow dhow.
Waxaa uu sheegay sarkaalka,is-aga oo la hadlayay Idaacadda Voa-da laa-nteeda Afka Soomaaliga in uu jiro khas-aaro kala duwan ,hayeeshee ay weli ba-aritaano ku hayaan,isaga oo ku eedeeyey in Dowladda Kenya ay ku xad gudubtay dhulka Soomaaliya jawaabna ay siin do-onaan.
Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya weli kama hadlin duqeynta diyaarad ay leedahay Kenya u geysatay Xarun ay leedahay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud oo ku taalla duleedka degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Madaxweynaha Galmudug oo la kulmey hoggaamiyaha Ahlusunna
Madaxweynaha Dowlad Gobol-eedka Galmudug Axm-ed Cabdi Kaariye (Qo-or Qoor) ayaa Madaxt-ooyada Galm-udug ee Magaalada Dhuusam-areeb waxaa uu ku qaabiley hoggaam-iyaha Guud ee Ahlusunna Macalin Ma-xamuud Sheekh Xasan.
Madaxweynaha Galmudug ayaa ku maanay hoggaanka Ahlusunna sida ay u muujiyeen tanaasulka iyo ka shaqeeynta dib u heshiisiinta deegaannada Galmudug maadaama horay uu u jiray khilaaf sab-abay gacan ka hadal.
Hoggaamiyaha Guud ee Ahlusu-nna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay inay diyara u yihiin la Shaqeynta Madaxda Ga-lmudug,isla markaana ay talooyin ku darsan doonaan.
Dagaal socdey in ka badan 24 Sa-acadood ayaa waxaa uu sabab u noqdey in Ciidanka Dowladda Soomaaliya ay la wareegaan Xarunta Inji oo aheyd fariisinka weyn ee hoggaanka Ahlusunna iyo hbkii iyo Ciidamadii Ahlusunna.
Weerar ka dhacay Boosaaso & howlgal ka socda
Rag ku hubeysnaa Bustoolado ay-aa waxaa la sheegay in xalay fidkii ay weerar toogasho ah ku qaadeen mid kamid ah Nabadoonada ugu caansan Gobolka Mudug,iyaga oo weerarkaas ku dhaawacay.
Nabadoonka la dhaawacay ayaa waxaa lagu Magacaabaa Nabaddoon Cabdullaahi Cali Sugulle oo kamid ah od-ayaasha dhaqanka gobolka Bari,waxaana la sheegay in dhowr Xabadooda lagu dhuftay xilli uu ku sugnaa Albaabka hore Hoygiisa oo ku yaalla xaafadda masjid Faadumo ee magaalada Boosaaso.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in xilliga la weerarayay Naba-doonka uu kasoo baxay Masaajiid uu kusoo dukaday Salaadii Cishaha,isla mar-kaana dadkii ka dambeyey weerarkaas ay goobta ka baxsadeen,sidoo kalena dhaa-waca nabadoonka la geeyey Isbitaalka weyn ee Magaalada Boosaaso.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Puntland ee ka howlgalla Magaalada Boo-saaso ayaa tan iyo markii uu dhacay weerarkaas Nabadoonka lagu dhaawacay kadib ayaa waxaa ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadi goobayaan dadkii ka dambeeyey falkaas.
Xaalada Magaalada Boosaaso ayaa ah mid degan,waxaana xusid mudan in tira ka dhowr jeer ah ay ka dhaceen weeraro kala duwan oo lagu dilay,Askar, Masuuliyiin iyo dad Shacab ah intaba.
Illaa 12 xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Kenya kuwaasoo laga soo doorto gobolada Waq-oyi Bari Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho iyagoo kulamo la yeelanayo madaxda dowlada federalka Soomaaliya.
Xildhibaanadan oo degaanada la-ga soo doorto ay kamid yihiin Man-dhera,Wajeer iyo degmooyin ku yaal xadka ay wadaagaan labada dal ee So-omaaliya iyo Kenya.
Ujeedada booqashada xildhiba-anadan oo aan si rasmi ah loo shaacin ay-aa wararka qaar sheegayaan inay kala hadlayaan madaxda Soomaaliya arrimo ku saabsan amniga labada dal gaar ahaan gobolada Waqooyi Bari Soomaaliya.
Xildhibaanadan ayaa waxaa ka mid ah qaar dhowaan su’aalo ku weydi-iyay gudaha Baarlamaanka Kenya was-iirka gaashaandhiga Kenya,iyagoo wax ka weydiiyay joogitaanka wasiirka Amniga Ju-bbaland Cabdirashiid Janan oo ay shee-geen inuu joogo magaalada Mandhera.
kale ujeedada booqashada xildhi-baanadan ayaa waxaa ka mid ah sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyadoo dhowaan Madaxweyne Kenya Uhur Kenyatta ugu baaqay madaxda gobolka Waqoyi Bari Kenya inay la yimaadeen qorshe lagula dagaalamayo Al-Shabaab.
Xildhibaanadan ayaa sida ay she-egayaan wararka ku dhow dhow mad-axtooyada Soomaaliya waxa ay la ku-lmeen Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Hase yeeshee marjiro wax war ah oo ka soo baxay kulanka ay xildhi-baanada Kenya la yeesheen Madaxweyne Farmaajo.
Booqashadan ayaa ku soo bee-gmaysa xilli dhowaan ay dowlada fede-ralka Soomaaliya ku eedeysay dowlada Kenya inay farogelin ku hayso arrimaha Soomaaliya,balse eedeyntaas waa iska fogeeyay dowlada Kenya.
Puntland: Nin la nool HIV/AIDs oo 20 sano xabsiya ku mutaystay kufsi gabadh 9 jir ah
Maxkamada sare ee Puntland ayaa maanta 20 sano oo xabsiya ku riday nin la nool cudurka HIV/AIDs oo kufsi u geystay Farax Faarax Jaamac Siyaad oo ahayd 9 jir.
Mukhtaar Cabdikaafi Xirsi , oo 36 jir ah, ayaa sidoo kale wajahaya magdhow lacageed oo dhan $5,000, kadib markii uu sidoo kale ku xadgudbay gabarnim-adeeda.
Ninkaan ayaa sanadkii hore max-kamad kutaala Gaalkacyo ku xukuntay dil toogasho. Hase yeeshee maxkamada rac-faanka ayaa xukunkaas burisay, iyadoo ka dhigtay 20 sano iyo shan kun oo dollar.
Xukunka ayaa mar kale usoo gud-bay maxkamada sare, taasoo maanta ay-iday go’aankii maxkamada racfaanka ka qaadatay kiiskaan.
Puntland , sanadkii hore waxay u ahayd sanad ay ka dhaceen kufsiyadii ugu foosha xumaa ee abid ka dhaca Soom-aaliya.Saddex kamid ah kiisaska ayaa ahaa kufsi iyo dil. Inkastoo mid kamid ah cadaalada la marsiiyay hadana weli waxaa horyaala labo kiis oo Puntland u ahaandoona tijaabo kale oo oculus.
Labadaas kiis waxay kala yihiin, marxuumad Hodan Shanlaysane oo Gar-owe lagu kufsaday laguna dilay iyo Najma Cabdulqaadir oo ahayd 11 jir lagu kufs-aday Burtinle markii dambena u geer-iyooday dhaawacii kasoo gaaray.
KUMANNAAN TAHRIIBAYAAL AH OO TURKIGA KA YAACAYA KUNA SII JEEDA YURUB
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in uu ka hor baydhayo qaxoonti badan, oo ka gudbi doona xadka ay la leeyihiin Yurub. Tiradan ayaa la rejaynayaa inay gaadho maalmaha soo aad dan ku dhawaad 30,000, sida uu sheegay
Khudbad uu Madaxweyne Edrogan u jeediyay xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa, ayuu ku shee gay in dowladda Suuriya ay ka qoomameeyn doo nto dilka ciidammadiisa.
Dalka Giriigga-na wuxuu sheegay inuu xadkiisa uu ka xidhay kumannaan qoxooti sharci darro ah oo dhinaca Turkiga ka soo geli lahaa dalkiisa. Iyagoo sunta dadka kaga ilmaysiisa ku kala eryay dad isasoo buux dhaafiyey xuduudkiisa Hay'adaha amniga ee xadka Giriigga ku sugan oo doonaya qoxootiga iney xadka soo tallaabaan isla mar ahaantaana soo dhaweyn ka helaan waddamada ay soo ge layaan.
Go'aanka uu Turkiga qaatay ayaa ku soo beegmay xilli Turkiga ku dhawaad 33 Askari waqooyiga Suuriya ee gobolka Idlib ay uga di leen ciidamada Suuriya.
Madaxweyne Erdogan oo xildhibaannada baarlamaanka ka tir san ee xisbigiisa la hadlayey wuxuu sheegay inuu madaxweyne Pu tin uu weydiisatay Ruushka inuu danta uu Turkigu ka leeyahay Gob olka Idlib uu ka leexdo si uu Turkiga keligii uu u wajaho dowladda Suuriya.
Gobolka Idlib oo ay ku sugan yihiin kooxaha fallaagada Suuriya.
Xoogagga xukumadda dimishiq oo garabsanaya Ruushka ayaa wa xay dadaal ugu jiraan sidi ay kooxaha jihaad donka iyo fallaagada uu Turkiga taageero oo qayba ka mid ah Idlib gacanta ku haya ay uga qabsan lahaayeen.
Dalka Turkiga waxaa ku sugan qoxooti ka badan 3.7 milion oo is ugu jira Suuriyaan iyo qoxooti dalal kale ka soo jeeda sid Afqaanis taan, oo horay looga hor istaagay iney Yurub magangalyo u raads adaan. Mr Edrogan wauxuu waddamada reer galbeedka ku eedeeyey ballamihi ay horay u qaadeen ee ku saabsan qoxootiga iney jabiyeen. Gobolka Idlib oo ay ku sugan yihiin kooxaha falla agada Suuriya.
Xoogagga xukumadda dimishiq oo garabsanaya Ruushka ayaa waxay dadaal ugu jiraan sidi ay kooxaha jihaad donka iyo fallaa gada uu Turkiga taageero oo qayba ka mid ah Idlib gacanta ku haya ay uga qabsan lahaayeen.
Dalka Turkiga waxaa ku sugan qoxooti ka badan 3.7 milion oo isugu jira Suuriyaan iyo qoxooti dalal kale ka soo jeeda sida Afqaa nistaan, oo horay looga hor istaagay iney Yurub magangalyo u raad sadaan.
Mr Edrogan wauxuu waddamada reer galbeedka ku eedeeyey ballamihi ay horay u qaadeen ee ku saabsanaa qoxootiga iney jabi yeen. Labada hoggaamiye oo khadka taleefanka ku wada hadlay ka dib marki 33 askari Turkiga duqeyn dhinaca cirka ah lagaga dilay gobolka idlib, Wuxuu dilka askarta Turkiga uu dusha ka saaray xoo gagga dowladda Dimishiq ee garabsaneya Ruushka.
Wuxuu Sida oo kale Mr Erdogan sheegay inuu albaabbada u fur ay dhammaan qoxootiga doonaya iney qaaradda Yurub u talla abaan dalkiisuna uu wixi hadda ka dambeeya u dul qaadaneyn qoxo oti tira badan iney ku soo qulqulaan. Madaxweyne Erdogan waxaa kale oo uu sheegay in albaabbada qoxootiga Yurub u tallaabaya uu furay maalmaha soo socdana iney sidaa u sii furnaanayaan.